बृद्धबृद्धा : लघुकथा - Lekhapadhi कथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बृद्धबृद्धा : लघुकथा
लेखक : लेखापढी १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२७ मा प्रकाशित
छोराको जन्मदिन धुमधाम सँग मनाउने भनेर बाबा आमाको तयारी भब्य थियो । छोराले जनाउँ दियो यो किन ? बाबुआमा जिल्ल परे !!
हेर छोरा जन्मदिन घरमा नै मनाउनु पर्छ । कतिले फोन गरिसके । कैले हो बाबुको जन्मदिन भनेर । छोरो बोलेन ।
छोरा तिम्रो जन्मदिनको भब्य तयारी हो यो । अब त जन्मदिन नजिकै आउँदै छ ।
बाबा जन्मदिनको उत्सवमा केही परिवर्तन गर्ने बिचार छ मेरो । म सोचि रहेछु ।
जन्मदिन आउनु दुई दिन अगाडि छोराले बाबुआमालाई देवघाट लग्यो । नदिमा नुवाइ धुवाइ गरेर माथि बृद्धाश्रममा गए । त्यहाँ असहाय बृद्धबृद्धा थिए । तिनलाई देखाउँदै उसले भन्यो । मेरो जन्मदिनमा उहाँहरुलाई केही खाने खानेकुरा खुवाउने बिचार गरेको छु ।
हेर्नुहोस न उहाँहरुको साहारा कोही छैन । कमसेकम घरमा जन्मदिनमा गरिने फजुल खर्चलाई यहाँ सदुपयोग गरौ । उहाँहरुले मलाई धेरै आर्शिवाद दिनु हुनेछ ।
बाबुआमा खुशी हुँदै भने आहा ! बाबुको सोच कति राम्रो । उनीहरुले त्यहाँ भएका बृद्ध-बृद्धाहरुलाई भने भोलिको खाना हाम्रो तर्फबाट । उनीहरु अति खुशी भए ।
खाना खाइ सके पछि बृद्ध महिला उठेर “बाबुको जन्मदिनमा हामी माथि निगाह गरि मिष्ठान र खिर खुवाई तृप्त गराउनु भो ।” हामी अति खुशी छौ । सायद जन्मदिनमा हामीलाई माया गर्ने यिनै बाबू हुन् पहिलो । हामी सबैको आशिक लागोस हाम्रो तर्फबाट आशिर्बाद छ बाबुलाई । बाबुको सधै उन्नती र भलो होस् ।
“बाबुको जन्मदिनमा हामी माथि निगाह गरि मिष्ठान र खिर खुवाई तृप्त गराउनु भो ।”
भोलि ठूलो मान्छे बनेर यहाँ भएका सबै बृद्धबृद्धामा दया गर्ने भावना पलाओस् । सबैका छोरा भनेका यस्ता होउन् । बूढाबूढीलाई माया गर्ने।
(“आधुनिक नेपाली लघुकथा समूह” सँगको सहकार्यमा हरेक हप्ता सोमबार लघुकथा प्रकाशन गर्ने गरेका छौ ।)